कोरोनाभाइरसः डाक्टरले आशा मारे, अन्तिम पटक भेट्न श्रीमती आइन् अनि… – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कोरोनाभाइरसः डाक्टरले आशा मारे, अन्तिम पटक भेट्न श्रीमती आइन् अनि…
कोरोनाभाइरसः डाक्टरले आशा मारे, अन्तिम पटक भेट्न श्रीमती आइन् अनि…
काठमाडौं। अमेरिकामा कोरोनाभाइरससँग बिरामी र डाक्टरले निकै ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन् । उपचारका क्रममा डाक्टरहरुले नयाँ–नयाँ चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । उपचारको राम्रो सुविधा हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा ५६ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस क्रममा एक बिरामी मृत्युको मुखबाट बाहिर आएको प्रेरणादायी घटना सार्वजनिक भएको छ ।
अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सका ४९ वर्षका जिम बेलो पेशाले वकिल हुन् साथमा उनी एथलेटिक्समा पनि सक्रिय रहन्छन् । उनी स्वस्थ थिए र उनलाई पहिलेदेखि कुनै रोग थिएन । तर, कोरोनाले उनी गम्भीर बिरामी भए । डाक्टरहरुले जिमकी पत्नी किमलाई जिमको बच्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून भएको बताइसकेका थिए । डाक्टरहरुले जिमको बच्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून र मृत्यु हुने सम्भावना धेरै भएको बताइसकेका थिए ।
तीन सन्तानका पिता जिमको उपचार म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटलमा गरियो । मार्चको सुरुवातमा उनलाई कडा ज्वरो आएको थियो । उनलाई ३२ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखियो । यस क्रममा ९ दिनम्म उनलाई आर्टिफिशियल हर्ट लंग मेसिनको माध्यमबाट जीवित राखियो । न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार डा. एम्मी रुबिनले किम बेलोसँग भनेकी थिइन् ‘बच्ने केही सम्भावना छ तर यदि तपाइँ इमान्दारीसँग जवाफ चाहनुहुन्छ भने नबच्ने आशंका धेरै छ ।’
जिमका फोक्सोले काम गर्न लगभग बन्द गरिसकेका थिए । डाक्टरले उनको एक्सरे हेरेर यो उनीहरुले त्यतिबेलासम्म देखेका एक्सरेमध्ये सबैभन्दा खराब स्थिति भएको बताएका थिए । डाक्टरहरुले कैयौं प्रयोगात्मक औषधीबाट पनि जिमको उपचार गरेका थिए तर उनको स्थिति बिग्रिँदै गयो । जिमको बच्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएपछि डाक्टरले उनकी पत्नीलाई बोलाए ताकि उनले अन्तिम पटक जिमलाई भेट्न सकुन् । यो दोस्रो पटक थियो जब उनी बिरामी पतिसँग भेट्दै थिइन् ।
पत्नी किम बेलोका अनुसार भेट्ने क्रममा उनलाई लाग्यो कि यदि उनले पतिसँग घण्टौं कुरा गरिन् भने उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्छ । पत्नीले यस क्रममा जिमलाई बताउँदै रहिन् कि उनलाई जिमको कति आवश्यकता छ । उनी लड्नुपर्छ, उनी आफूहरुलाई छोडेर जान सक्दैनन् । डाक्टरहरुले पत्नीलाई भेट्नको लागि १५ मिनेट समय निर्धारण गरेका थिए तर पछि डाक्टरहरुले ३ घण्टासम्म उनीहरुलाई साथमै रहन दिए । किमले यस क्रममा पतिसँग भनिरहिन् ‘म तिम्रो हात समाइरहेकी छु, तिम्रो शीर सुम्सुम्याइरहेकी छु ।’
जिम बेलो ठिक भएपछि पनि डाक्टरहरुलाई समेत थाहा छैन कि उनी कसरी बचे । उनको उपचार गर्ने एक डाक्टर पल कुरियरले भने ‘मलाई आश्चर्य हुने छैन यदि पत्नीसँगको भेटले उनलाई सहयोग गरेको भएमा । पत्नी उनको बेड छेउमा ३ घण्टासम्म बसिन् । यो उनको जीवनको सबैभन्दा खराब समय थियो । तपाइँ यसलाई कम गरेर हेर्न सक्नुहुन्न कि यस किसिमका कुराहरुले कति ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन् ।’ पत्नीसँग भेटेको ३ दिनपछि एक्सरेमा डाक्टरहरुले आशाको पहिलो किरण देखे । त्यसपछि जिमको स्थिति लगातार सुधार हुँदै गयो । अन्ततः १४ अप्रिलमा जिमलाई भेन्टिलेटरबाट हटाइयो र उनी स्वयं सास फेर्न थाले । अहिले उनी डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन् ।
जनकपुरको सडकमा जब २ महिला पैसा छरेर गायब भए…
ससुरा-बुहारीको अवै’ध स’म्बन्ध ! सासुले रं’गेहात समातेपछि घ’टना खुल्ने ड’रले सासुलाई वि’ष खुवाइयो (भिडियो)